ဘယ်လို DAEMONS TOOLS များထဲမှာတစ်ဦး DISK ကို IMAGE ကိုဖန်တီးရန် - DAEMONS TOOLS များ - 2019
အချို့ကိစ္စများတွင်အဲဒါကိုအီးမေးလ်၏အသုံးပြုသူအမည်မှတ်မိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အခွအေနေပေမည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အသစ်သောအကောင့်များဖြင့်ဖြစ်ပျက်များနှင့်ယခင်ကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ user data ကိုအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးများအတွက်ရရှိသောမဟုတ်ပါတွေ့ရှိရန်။
Yandeks.Pochte မှ login ကိုသတိရပါ
အသုံးပြုသူအီးမေးလ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရန်မေ့လျော့တဲ့အခါမှာ, သင်ပွနျလညျထူထောငျကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ဤထိုသို့မှတ်ပုံတင်သည့်အခါဒေတာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်သောအရာကိုမှတ်မိဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်:
Yandex-mail ကိုပေါ်ရဲ့ login page ကိုဖွင့်ပါ။
ကို Select လုပ်ပါ "သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေ".
အသစ်က window ထဲတွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ငါသည်အသုံးပြုသူအမည်သတိရကြဘူး".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, ဖုန်းအီးမေးလ်လိပ်စာပူးတွဲခဲ့သောဖို့အရေအတွက်က, အ captcha ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Continue".
SMS ကိုဝင်ကြ၏အရေအတွက်ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်။ post ကိုကုဒ်ပြတင်းပေါက်၌ ဝင်. ကို select ရမည်ဖြစ်သည် "Continue".
ရလဒ်အဖြစ်န်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ထားသောဒေတာနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုတွေ့လိမ့်မည်။ အရာအားလုံးမှန်လျှင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဝင်မည်" သို့မဟုတ် "သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေ".
Read more: Yandeks.Pochte ပေါ်တွင်သင်၏ password ကိုမှတ်မိဖို့ဘယ်လို
Recovery ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမေ့လျော့ရဲ့ login အလုံအလောက်ရိုးရှင်းပါသည်။ မှတ်ပုံတင်သည့်အခါသို့သျောကြှနျုပျတို့သညျဤအသေးစိတျကိုမှတ်မိရပါမည်။ အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာထဲသို့ဝင်လျှင်, ဝန်ဆောင်မှုပြောပြရန်နှင့်ပျောက်ဆုံးအကောင့်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။